गणेश चतुर्थी किन मनाईन्छ, धार्मिक विश्वासहरु के हुन् ? - ACPNEWSNEPAL
Home Breaking News गणेश चतुर्थी किन मनाईन्छ, धार्मिक विश्वासहरु के हुन् ?
गणेश चतुर्थी किन मनाईन्छ, धार्मिक विश्वासहरु के हुन् ?
३० भाद्र २०७८, बुधबार ०८:०२
श्याम कुमार साहू, नेपालगन्ज – गणेश चतुर्थीको पर्व, जुन हरेक बर्ष महान उत्सव संग मनाईन्छ,। गणेश चतुर्थी यस बर्ष हिन्दुहरु द्वारा दस दिनको लागी मनाईन्छ। यो एक पर्व हो जसमा उनीहरु आफ्नो भगवान गणेशको जन्म मनाउँछन्। अहिले भारतको महारास्ट्र , मुम्बईमा यो पर्व बिश्वको एक एतिहासिक रुपमा रहेका हो । अहिले नेपालगन्जमा सदरलाईनको हरि ॐ मेडिकलको नजिकै गणेश भगवानको प्रतिमा स्थापना गरिएको हो । यसका साथै नेपालगन्जका विभिन्न स्थानमा प्रतिमा स्थापना गरिएको हो । धार्मिक मान्यता अनुसार गणेश शंकर र पार्वतीका छोरा हुन्। जो १०८ नाम बाट परिचित छन्। गणेश सबै देवताहरु मध्ये पहिलो हो यो भगवान गणेशको जन्म मनाउने पर्व हो। १०८ नाम संग परिचित छ । भगवान गणेश सबै देवताहरु मध्ये पहिलो हुन त्यही पूजा गरिन्छ। यस्तो स्थितिमा, हामीलाई थाहा छ गणेश चतुर्थी किन मनाईन्छ।
गणेश जी को जन्म भाद्रपदको शुक्ल पक्षको चतुर्थीमा भएको थियो, श्री गणेश जी को जन्म भाद्रपदको शुक्ल पक्षको चतुर्थी मा भएको थियो। यही कारणले गर्दा हरेक वर्ष गणेश चतुर्थी यस दिन धूमधाम संग मनाईन्छ। भगवान गणेशको जन्मदिनको उत्सवलाई गणेश चतुर्थी भनिन्छ। गणेश चतुर्थी को दिन भगवान गणेश को ज्ञान, समृद्धि र सौभाग्य को देवताको रूपमा पूजा गरिन्छ। यो विश्वास छ कि भगवान गणेश को भाद्रपदमा शुक्ल पक्षको समयमा जन्म भएको थियो। यो विश्वास गरिन्छ कि भगवान गणेश मध्यकालीन कालको समयमा पैदा भएको थियो, यसैले समय गणेश पूजाको लागी अधिक उपयुक्त मानिन्छ।
हिन्दू धर्मको मान्यताहरु अनुसार यो कथा हो हिन्दु धर्मको विश्वास अनुसार गणेश को जन्म संग सम्बन्धित धेरै कथाहरु छन्। त्यसोभए दुई यस्तै कथाहरुको बारेमा कुरा गरौं। भनिन्छ कि देवी पार्वतीले यो उनको शरीर बाट हटाईएको फोहोर बाट बनाइयो। जब उनी नुहाउन गइन्, गणेश आफैंलाई बचाउन बाहिर बस्न बाध्य बनाइयो। भगवान शिव, जो पार्वती को पति हुन, घर फर्केपछि गणेश, उनको बुबाबाट अनभिज्ञ, उनलाई रोक्नको लागी कोशिश गरे, जो शिवको क्रोधित भयो र गणेश को टाउको काटि भस्म गरेका हुन ।
यसैले यो भनिन्छ कि जब देवी पार्वती लाई यो सब थाहा भयो, उनी शिव संग क्रोधित भए, जसमा शिवले उनलाई गणेशको जीवन हात्तीको टाउको संग फिर्ता ल्याउने वचन दिए र यसरी गणेश को जीवन फेरि पायो। तर केहि मानिसहरु भन्छन् कि भगवान शिव र पार्वती को अनुरोधमा गणेश को रचना गरीयो ताकि उनी राक्षसहरुलाई मार्न सकून् र यसैले उनलाई विघटनकारी पनि भनिन्छ।
Previous articleसनराईज युथ सिरहा संजाल” द्वारा दुई कार्यक्रम काे आयोजना
Next articleपार्टी फुटने डरले राती निन्द्रा पनि हरायो उपेन्द्र यादवको मन्त्री मोह त्याग्न बाध्य